I-Google Stadia manje isiyatholakala ku-Google Play Isitolo, kodwa awukwazi ukusakaza imidlalo kuze kube manje. - ITELE RELAY
Accueil » I-TECH & ITELECOM I-Google Stadia manje isiyatholakala ku-Google Play Isitolo, kodwa awukwazi ukusakaza imidlalo kuze kube manje.
I-Google Stadia manje isiyatholakala ku-Google Play Isitolo, kodwa awukwazi ukusakaza imidlalo kuze kube manje.
I-Google idinga ukuthi udlale imidlalo yekhwalithi yekhonsoli cishe kunoma iyiphi ithuluzi okwakho. Lona ngumqondo we-Google Stadia, insizakalo esakaza umdlalo kudivayisi yakho, ngoba amaseva weGoogle aphatha konke ukwelashwa okudingekayo. Usazodinga ukuthenga imidlalo ngokwahlukana, kepha kungahle kube insiza yomdlalo wamafu wokuqala onekhono ngempela.
IStadia ayilungele ukudlulisela le midlalo kumadivayisi wakho we-Android okwamanje, kepha uma ufuna ukuqala ikhanda, uhlelo lokusebenza lwe-Stadia luyatholakala ukuze ulandwe kusuka ku-Google Play Isitolo .
Uhlelo lokusebenza lizoba izindlela zakho eziyinhloko zokuxhumana nensizakalo, noma ngabe usebenzisa muphi umshini. Uhlelo lokusebenza luzokuvumela ukuthi uthenge imidlalo, uphathe i-akhawunti yakho ye-Stadia nabalawuli bakho, bese uqala amaseshini omdlalo.
Ngeke ukwazi ukudlala noma yimiphi imidlalo eStadia ngaphambi kukaNovemba 19, lapho kuzokwethulwa insizakalo, kepha uhlelo lokusebenza lwe-Android ngeke luhambisane ngokuphelele. akunamsebenzi njengamanje. Kuzokuvumela ukuthi usethe i-akhawunti yakho ye-Stadia, inqobo nje uma unekhodi yezimemo kusuka kwa-Stadia Founders noma i-Kiti Ye-First Edition, noma i-Buddy Pass evela kumngane.
Umthombo wesithombe: ] Google
Ukufakwa kuhlu kwe-Google Play Isitolo kuveza ezinye izici zohlelo lokusebenza, kufaka phakathi ithebhu yasekhaya ekhombisa imidlalo yakho ngezinkinobho zomdlalo phezulu, ne-Explore tab ebonisa imiyalezo yomphakathi. . Ukuhlanganiswa kwe-YouTube, iReddit, i-Twitter, i-Facebook ne-Discord nakho kuhlelo lokusebenza.
Okuthokozisayo ngohlelo lokusebenza ukuthi lwakhiwa eFlutter, nge-SDK entsha yeGoogle okuvumela abathuthukisi ukuthi bakhe izinhlelo zokusebenza zamapulatifomu amaningi ngasikhathi sinye, okusho ukuthi uhlelo lokusebenza lwe-iPhone cishe luzobukeka njengenguqulo ye-Android. Noma kunjalo, uhlelo lokusebenza alukwazi ukufakwa kuma-Chromebooks okwamanje, ngoba i-Google iyalivikela.
Uma sekuqaliswe iStadia, uzokwazi ukudlala imidlalo kuzingcingo zePixel, kepha kuzodingeka ube nekhodi yokufinyelela. Uhlelo lokusebenza lwe-Android Stadia, okwamanje, luyatholakala ku-Google Play Isitolo ngenkathi inguqulo ye-iPhone izotholakala ukuze ilandwe ku-App Store ngokushesha nje i-Apple isivume.
Umthombo wesithombe: Google
Lesi sihloko sivele kuqala https://bgr.com/2019/11/07/google-stadia-android-app-ready-for-download-ahead-of-service-launch/
Kungani iGoogle Chrome izovimba ezinye izithombe namavidiyo ngokuzenzakalela